China Crystal diamond girazi rinoonekera chemwenje fekitori uye vagadziri | Honghui Girazi
Saizi yakakura, inokodzera nzvimbo dzakasiyana siyana, zvese zvekushongedza uye zvinoshanda.
★ Yakagadzirwa yemhando yepamusoro girazi zvinhu, uye chigadzirwa chakasimba uye chakatsetseka.
Iyo geometric yakatemwa pamusoro inoita kuti girazi zvinhu zvinyatso kujeka, senge static yedhaimani yakatemwa pamusoro, jekiseni rinodhakisa mwenje nemumvuri muhupenyu.
★ Iyo yakajairwa-matatu-mativi akachekwa pamusoro akafuma mukubata uye akanaka muchitarisiko.
✔✔✔ [Yakashongedzwa imba yakashongedzwa nezvipo]: Makenduru maketi akakosha ekuwedzera kubwinya uye kudanana patafura yekudyira. Imba yekurara, tafura yekicheni uye yekugara yekofi tafura yekushongedza, yakashongedzwa yeKisimusi, Yekutenda uye chero yemafaro tafura yekushongedza.
✔✔✔ [Yakanaka uye inoverengeka chipo chekupedza kudzidza] mazuva ekuzvarwa, zuva rekuyeuka, kuvonga, chipo cheZuva raValentine, Chipo chezuva raAmai, Chipo chaBaba, Romance & Rudo, Cyber ​​Muvhuro & Nhema Chishanu uye nhambo dzakakosha Isai tii mwenje (hauna kupihwa) mune yega yega inobata uye inoburitsa yakapfava amber kupenya uye inogadzira yakatsetseka mhepo iyo inoderedza kushushikana kwako uye inovandudza kurara
✔✔✔ [MABHUKU]: zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kune yemhando mbishi zvinhu nekushomeka kwekutambisa padanho rega rekugadzira. Nechinangwa chekuwana kwazvakarerekera kabhoni tsoka, ndapota dzokororazve uye ubatsire kusiya Amai Pasi zvirinani kune zvizvarwa zvinotevera.
✔✔✔ [Chengetedzo] Cherekedza: Usati wazadza furemu yegirazi nemakenduru matsva, ndapota sukurudza zvakanaka kuitira kuti pasave nenamo yakasara uye / kana tambo pamakenduru apfuura, zvichikonzera njodzi yekuchengetedza-gara uchichengeta zvipfuyo zvevana Uye kure zvinotsva zvishandiso.
✿ Minimalist-dhizaini dhizaini inoita kuti hupenyu huwedzere kunaka, Huremu uye hunhu hwakanaka, Yakagadzirwa kubva kusimbi ine yakaoma kunzwisisa, Gadzira inonakidza inoratidzira yechiedza nemumvuri.
✿ Yakareruka yazvino dhizaini kune chero kushongedzwa, kwakanakira imba yekutandarira, nzvimbo yekudyira, furati, imba yekugezera, uye yekushongedza yekurara.
✿ Wedzera Kenduru Mwenje-Iyo inoyevedza pateni mwenje mwenje chinobata, inobata wakisi tii mwenje makenduru kana asina mwenje tealight makenduru. Yakakwana yemwenje yekurara yekuvhenekesa kana imba yekutandarira, inoita zvakare kuwedzera kwakanakisa kune yechiitiko fanicha.
Pashure: Mvura ripple cylindrical girazi chemwenje
Zvadaro: Transparent girazi pentagram chigadziko chemwenje
Makuru Glass Kenduru zvirongo
Transparent girazi pentagram chigadziko chemwenje
Tsvuku yakajeka girazi lotus kenduru mukombe
Tsvuku yakajeka yegirazi regirazi chemwenje
Girazi dzvuku girazi chemwenje
Flat - yakadonhedzwa lotus yakajeka mwenje ...
480g yakajeka girazi kenduru mukombe